Monday February 22, 2021 - 10:16:13 in Wararka by Burco Office 2
Hey'adda duulimaadyada ee Mareykanka FAA ayaa amartay in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo diuyaaradaha noocoodu yahay Boeing 777 ee ay ku rakiban yihiin matoorada ay sameyso shirkadda Pratt iyo Whitney.
Baaritaan horudhac ah oo ay sameysay hey'adda qaabilsan bad-qabka gaadiidka Mareykanka ayaa sheegtay in laba kamid ah marwaaxada matoorka diyaaradda ay wax gaareen.
"Annagoo ka duuleyna xogta horudhaca ah, waxaan ogaanay in baaritaanada lasii xoojiyo, gaar ahaan marwaaxadaha matoorka oo ah nooc u gaar ah matoorka diyaaradahan." Ayay yirahden mas'uuliyiinta hey'adda duulimaadyada ee dalka Mareykanka.
Haseyeeshee shirkadda Boeing ayaa sheegtay inay taageersan tahay go'aanka dowladda Japan, loona baahan yahay in la hakiyo hawlgellinta dhammaan diyaaradaha noocoodu yahay Boeing 777 ee ay ku rakiban yihiin matoorada Pratt iyo Whitney inta ay socdaan baaritaanada. Shirkadda waxaa kale oo ay sheegtay in diyaaradaha Boeing 777 ee ku duula matooradaas ay guud ahaan caalamka gaarayaan 69.
Mid ka mid ah dadki rakaabka ahaa ee diyaaraddaasi saarnaa oo wakaaladda wararka ee AP u warramay waxaa uu sheegay inuu duuliyaha diyaaradda uu rakaabka u sheegay inuu qarax aad u weyn uu jiro